Yobhi 34 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
34 Waza uElihu waqhubeka waphendula wathi: 2 “Phulaphulani, nina balumkileyo, amazwi am; Nani banolwazi, ndibekeleni indlebe. 3 Kuba indlebe iyawavavanya amazwi,+ Kanye njengokuba inkalakahla ikungcamla ukutya.+ 4 Masizinyulele umgwebo; Masazi okulungileyo phakathi kwethu. 5 Kuba uYobhi uthe, ‘Ngokuqinisekileyo ndilungile,+ Kodwa uThixo uwujikile umgwebo wam.+ 6 Ngaba ndixoka nxamnye nowam umgwebo? Inxeba lam elikhulu alinyangeki nangona kungekho kunxaxha.’+ 7 Yiyiphi na indoda eyomeleleyo efana noYobhi,+ Esela ugculelo njengamanzi?+ 8 Yaye ngokuqinisekileyo iza kuba liqabane labo baqhelisela okwenzakalisayo Yaye iza kuhamba namadoda angendawo.+ 9 Kuba uthe, ‘Indoda eyomeleleyo ayingenelwa+ Ngokukholiswa nguThixo.’ 10 Ngoko ke, nina madoda aneentliziyo,+ ndiphulaphuleni. Makube lee kuTHIXO oyinyaniso ukwenza ngobungendawo,+ NakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!+ 11 Kuba uya kumvuza+ umntu wasemhlabeni ngokwendlela enza ngayo, Yaye uya kumbangela umntu afikelwe ngokomendo wakhe. 12 Ewe, enyanisweni, uThixo akenzi ngobungendawo,+ Yaye uSomandla akawugqwethi umgwebo.+ 13 Ngubani na omabele umhlaba, Yaye ngubani na ommisele ilizwe elinemveliso, xa lilonke? 14 Ukuba umilisela intliziyo yakhe kubani, Ukuba umoya nempefumlo yalowo uyihlanganisela kuye,+ 15 Yonke inyama iya kubhubha kunye, Nomntu wasemhlabeni uya kubuyela eluthulini.+ 16 Ngoko ukuba unokuqonda, phulaphula oku; Sibekele indlebe isandi samazwi am. 17 Eneneni ngaba nabani na othiye okusesikweni uya kulawula,+ Yaye ukuba onamandla ulilungisa ngaba uya kumvakalisa engongendawo?+ 18 Ngaba ubani uya kuthi kukumkani, ‘Ulitshivela’? Athi kwizidwangube, ‘Ningendawo’?+ 19 Kukho Lowo ungakhethi nkosana Unganikelanga ngqalelo engakumbi kwisidwangube kunakulowo usweleyo,+ Kuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.+ 20 Ngomzuzwana bayafa,+ kwanasezinzulwini zobusuku;+ Abantu bayahexa baze badlule, Yaye abanamandla bemka kungengasandla.+ 21 Kuba amehlo akhe asezindleleni zomntu,+ Yaye onke amanyathelo akhe uyawabona. 22 Akukho bumnyama nathunzi limnyama Kwabo baqhelisela okwenzakalisayo ukuba bazifihle khona.+ 23 Kuba akambekeli ixesha elimisiweyo nawuphi na umntu Ukuba aye kuThixo emgwebeni. 24 Abo banamandla+ ubaphula ngaphandle kwalo naluphi na uhlolisiso, Aze amise abanye esikhundleni sabo.+ 25 Ngoko ke uyakuqonda oko ukuko umsebenzi wabo,+ Yaye uyababhukuqa ebusuku, baze batyunyuzwe.+ 26 Njengabangendawo uyabampakaza Endaweni enababoneli;+ 27 Ngenxa yokuba basukile ekumlandeleni,+ Yaye akukho nanye kwiindlela zakhe abayiqwalaseleyo,+ 28 Ukuze abangele isikhalo sosweleyo sifike kuye; Yaye ngoko uyasiva isikhalo sabaxhwalekileyo.+ 29 Xa yena ebangela ukuzola, ngoko, ngubani onokumgwebela isohlwayo? Xa ebufihla ubuso bakhe,+ ngubani onokumbona, Enoba luhlanga+ okanye ngumntu, kuyinto efanayo? 30 Ukuze umntu owexukileyo angalawuli,+ Kungabikho namigibe+ yabantu. 31 Kuba ngaba nabani na eneneni unokuthi kuThixo, ‘Ndithwele, nangona ndingonakalisi;+ 32 Nangona ndingaboni nto, ndiyalele ngokwakho; Ukuba kukho intswela-bulungisa endiyenzileyo, Andisayi kuyenza kwakhona’?+ 33 Ngaba uya kuyibuyekeza ngokwembono yakho ngenxa yokuba uwala umgwebo, Ngenxa yokuba inguwe okhethayo, ingendim? Kwanoko ukwazi kakuhle, kuthethe. 34 Amadoda anentliziyo+ aya kuthi kum— Kwanendoda eyomeleleyo nesisilumko endiphulaphuleyo, 35 ‘UYobhi uthetha engenakwazi,+ Amazwi akhe uwathetha engenangqiqo.’ 36 Bawo, uYobhi makavavanywe ngokupheleleyo Ngeempendulo zakhe phakathi kwamadoda enzakalisayo.+ 37 Kuba phezu kwesono sakhe wongeza imvukelo;+ Phakathi kwethu uqhwaba izandla aze andise amazwi akhe nxamnye noTHIXO oyinyaniso!”+